အ​မျိုး​သား​​ ​၅၀၀၀​ ​ကျော်​နှင့်​​ ​အ​တူ​ အိပ်​ခဲ့​ဖူး​သည့်​ ​ဗြိ​တိန်​ အ​မျိုး​သ​မီး… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » အ​မျိုး​သား​​ ​၅၀၀၀​ ​ကျော်​နှင့်​​ ​အ​တူ​ အိပ်​ခဲ့​ဖူး​သည့်​ ​ဗြိ​တိန်​ အ​မျိုး​သ​မီး…
အ​မျိုး​သား​​ ​၅၀၀၀​ ​ကျော်​နှင့်​​ ​အ​တူ​ အိပ်​ခဲ့​ဖူး​သည့်​ ​ဗြိ​တိန်​ အ​မျိုး​သ​မီး…
Posted by lu ta lone on Aug 24, 2010 in News, Other - Non Channelized, World News | 30 comments
လူတလုံး အာဘော်... အ​မျိုး​သား​​ ​၅၀၀၀​ ​ကျော်​နှင့်​​ ​အ​တူ​ အိပ်​ခဲ့​ဖူး​သည့်​ ​ဗြိ​တိန်​ အ​မျိုး​သ​မီး...
အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် ဗြိတိသျှ အမျိုးသမီး​ နစ်ကီလီ
အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် ဗြိတိသျှ အမျိုးသမီး တစ်ဦးက သူမသည် အမျိုးသား ၅၀၀၀ ကျော်နှင့် အတူ​ အိပ်ခဲ့ပြီး​ ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်​ ပြောဆို​ လိုက်သည်။
နစ်ကီလီက သူမ​ အသက် ၁၆ နှစ်​ အရွယ် အပျိုစင်​ ဘဝ ဆုံးရှုံး​ ပြီးကတည်းက အမျိုးသား အမြောက်​ အမြားနှင့် လိင်​ ဆက်ဆံ​ ခဲ့ကြောင်း ပြောကြား​ ခဲ့သည်။ နစ်ကီက နိုက်ကလပ်များ၊ လမ်းကြားများ၊ ပန်းခြံများ၊ ရုပ်ရှင်​ ရုံများနှင့် ဆယ်ကျော်သက် ကပွဲများ​ ပါမကျန် အမျိုးသားများနှင့် တွေ့ဆုံပြီး လိင်​ ဆက်ဆံ​ ခဲ့သည်ဟု​ ဆိုသည်။ သူမက ကမ်းခြေများ၊ ကလပ်များနှင့် အပမ်းဖြေ လေသာဆောင်များတွင်လည်း အပါတ်စဉ် လိင်​ အားလပ်ရက် သတ်မှတ်ကာ အပန်းဖြေ​ ခရီးထွက်ပြီး အမျိုးသားများနှင့် အိပ်ခဲ့ကြောင်း ဂုဏ်ယူစွာ ပြောဆို​ သွားသည်။ အမျိုးသား​ အများစုသည် ခုတင်​ တစ်လုံးမှ တိုင်​ အရေအတွက်လောက် ​သော​ အမျိုးသမီးများနှင့် လိင်​ ဆက်ဆံဖူးသည်ဟု ကြွေးကြော်​ ခဲ့ကြောင်း၊ မိမိကမူ စာအုပ်​ တစ်အုပ်စာ ရေးမှတ်​ ရလောက်သည့် ပမာဏမျှ ထိုကိစ္စကို ဆောင်ရွက်​ ဖူးသည့်​ အတွက် ပိုမို​ သာလွန်ကြောင်း နစ်ကီကဆိုသည်။ အီဘီဇာသို့ ခရီး​ ထွက်စဉ်က သူမသည် တစ်ညထဲတွင် အမျိုးသား လေးဦးနှင့် လိင်​ ဆက်ဆံခဲ့ကြောင်း နစ်ကီက ပြောကြား​ သွားသည်။
မိမိသည် စည်းကမ်းချက် နှစ်ခုကိုမူ သတ်မှတ်ထားကြောင်း၊ မိမိနှင့် ဆက်ဆံသော အမျိုးသားသည် လွတ်လပ်သူ ဖြစ်ရမည်​ ဆိုသော အချက်နှင့် လုံခြုံစိတ်ချရသည့် (ကွန်ဒုံးသုံးသည့်) လိင်ဆက်ဆံမှု ဖြစ်ရမည်​ ဆိုသော အချက်များ​ ဖြစ်ကြောင်း နစ်ကီက ရှင်းပြခဲ့သည်။ ထိုအချက်များ ပြည့်စုံပါက သူမနှင့် တွေ့ဆုံသည့် အမျိုးသားတိုင်း အပြည့်အဝ ပျော်ရွှင်​ ကျေနပ်​ စေရမည်ဟုလည်း နစ်ကီက အာမခံသွားသည်။
ဘုရား… ဘုရား…. ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး… တွေ့လည်းတွေ့တက်ပ လူတစ်လုံး ရယ်…
အသက် ၁၆နှစ်ကနေ ၂၅နှစ်ဆိုတော့ ၉နှစ်။ (၃၂၈၅ ရက်)
လူအယောက် ၅၀၀၀ ပဲထားဦး သူ့နှုန်းက ၂ရက် ၃ယောက်နှုန်းဖြစ်နေတယ်။
ဟုတ်ရင်လည်း…ရှေးက နတ်သားတဖက် ၄-၅ရာနဲ့ပျော်ပါးမဲ့ နတ်သမီးလို ဖြစ်နေမယ် ထင်ရတယ်။
( ပျော်စေပျက်စေပါနော… ရိုင်းတယ်ထင်ရင် မဖတ်နဲ့)
အဟိ ဖတ်ပြီး သဂျီးလိုတွေးလိုက်မိတာ ..သူဦးသွားတယ်..
ဒါကြောင့်လည်း သဂျီးမင်းဖြစ်နေတာပဲ ..
အော်သဂျီးကလဲ တရက်ထဲ ၄ ယောက်ပါဆို။
အမှန်ပြောတာလား၊ အပိုပြောတာလားတော့ သူကိုယ်တိုင်ပဲ သိမှာပေါ့၊ သူပြောတဲ့အရေအတွက် ဟုတ်မဟုတ် ဘယ်လို စစ်မလဲ?
အသာနေကြ လူကလေးတို့ 
အဘရဲ့ ပေတံနဲ့တိုင်းကြည့်ပါရစေဦး
အလို…. တိုင်းရင်းနဲ့ ပေတံပျောက်သွားရင် ဘယ်နှယ့်လုပ်ကြမလဲ အဘရဲ့ ။ စဉ်းစားဘာအုန်း
အားပါးပါး… ထင်တောင်မထင်၇ဘူး… မိန်မကြီးဖြစ်ပြီးတော့.. ယောကျာ်းဆိုတော်သေးတယ်…
ဘယ်နားမှာလဲ စိတ်ဝင်စားလို့ အခုနေသွားရင် 6000 လောက်တော့စာရင်းဝင်မှာသေချာတယ် …
အရေ အတွက် မှာ သုည တစ်လုံးပို သွားတာနေမှာပါ စိတ်ရှုတ်ခံပြီး မစဉ်းစားနေနဲ.
၁၆ နှစ်လောက်ကဘဲ ဒီလောက်ထိ ကြိမ်ဖန်များစွာ ဆက်ဆံ လာ၇င် အဲဒီအမျိုးသမီး သားအိမ် ကင်ဆာ ဖြစ်နေလောက် ပြီ
ဒါကိုများ ဂုဏ်ယူ ၀င့်ကြွား ပြီး ပြောတာရှိတေးတယ်ဆိုပါ့
ပြောစရာတောင်မရှိလောက်အေင် အံ့သြမိပါရဲ့ အမိငယ်ရယ်….
နာ တို့နိုင်ငံမှာလည်း အဲဒီလို ထုတ်ဖေါ်ပြောရဲတဲ့သူမရှိသေးလို့ …ပြောခွင့်သာလို့ ပြောရဲတဲ့သူရှိရင် ဟဲ့..ဗိုလ်မရယ်…နင်ကိုလေ…ပျင်းတောင်ပျင်းသေးတယ်…ပျင်းတောင်ပျင်းသေးတယ်လို့တောင် အော်ဆိုသွားလိမ့်မယ်နော်…
Nikki Lee, 25, beds with 5000 men in9years & keeps details in notebook
Nikki Lee, who also works asamodel, averages two men every day and had slept with precisely 2,288 by the time she turned 21.
A 25-year-old blonde beauty who lost her virginity at 16 boasted that she has slept with 5,000 men in nine years.
She has had sex in teen discos, nightclubs, cinemas, parks and alleyways. She also said she has done it on beaches, in clubs, and on balconies.
And Nikki has kept details of EVERY ONE of her sex sessions in her own little red notebook – and scored each man out of ten.
The beauty therapist from Essex says : “I putastar beside the lads who were best in bed. By the time I was 18, I had moved out of home and in with friends and there were nearly 800 in my book.”
Shameless Nikki revealed that when she ran out of men in her own town, she headed abroad for three sex sessionsaday.
And she boasted about her “personal best” of four men in one night duringaboozy holiday to Ibiza. Talking about the first time she had sex, Nikki said: “I’d discovered something I was good at.
“I started keeping my notebook within weeks. I was proud of how many men I was sleeping with and I was scared I would lose track.
“Every lad I recorded was proof I was more sexy than other girls.
“I putastar beside the lads who were best in bed.
“By the time I was 18, I’d moved out of home and in with friends and there were nearly 800 in my book.”
Nikki claimed she has been careful and uses condoms as well as the contraceptive pill.
She told Love It! magazine: “My behaviour wasn’t hurting anyone. I visited my local sexual health clinic every couple of weeks to make sure my lifestyle wasn’t harming me.”
But sex experts say that Nikki is damaging herself in lots of ways.
Sexpert Dr Pam Spurr said: “I’m shocked Nikki has slept with so many men. It’s technically possible but emotionally it’s very dangerous.
အင်းးး သူကြီး ရှာဖွေပြီး တင်ပေးရကျိုးနပ်သွားအောင် ၊
ရွာသူားတွေရဲ့ အကျိုးကိုမျှော်ကိုးပြီး ဘာသာလေးဝင်ပြန်ပေးလိုက်ပါ့မယ် ။
ယခုပြုရ ကုသလကြောင့် ဖြစ်လေရာ ဘဝ တိုင်းမှာ ၊ ဟီဟိ ။
သာဓု ခေါ်ပေးကြပါအုန်းကွယ် ။
” A 25-year-old blonde beauty who lost her virginity at 16
boasted that she has slept with 5,000 men in nine years ”
အသက် ၂၅ နှစ် ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ရွှေဝါရောင် ဆံပင်ပိုင်ရှင်လေးက ၊
သူက ၁၆ နှစ်သမီး ကတည်းက အပျိုစင် ဘဝကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ပြီး ၊
၉ နှစ်အတွင်းမှာ ယောက်ျား ၅၀၀၀ နှင့် အိပ်ခဲ့ပါတယ်လို့ ကြွားသွားပါတယ် ။
အော် ကြွားနိုင်သူတွေဆိုတော့ ကြွား လို့ရတာပေါ့နော် ။
အရင်ဘဝက ဆုတောင်းကောင်းခဲ့လို့ ထင်တယ် ။
အဘ တို့မှာတော့ စစ်စစ်ပေါက်ပေါက် လိုက်ရေကြည့်ရင်တောင်မှ တစ်ရာ မရှိလောက်ဘူး ။
” She has had sex in teen discos, nightclubs, cinemas, parks and alleyways.
She also said she has done it on beaches, in clubs, and on balconies ”
သူမက နေရာမျိုးစုံ / နေရာမရွေးပဲ ချစ်ပွဲကို ဆင်နွဲပါတယ်တဲ့ ။
ရုပ်ရှင်ရုံ ၊ ပန်းခြံ ၊ လူသွား လမ်းကြား ၊
နောက်ဆုံး ပင်လယ်ကမ်းစပ် သဲသောင်ပြင်တွေ နှင့်
လသာဆောင် ဝရံတာပါ မရှောင်ပါဘူးတဲ့ ။
လူမျိုးရေး ခွဲခြားမှု Racial Discrimination မရှိတာထက် အဆင့်မြင့်တဲ့ ၊
နေရာ မခွဲခြား / နေရာမရွေး Place Discrimination မရှိတာ ဆိုပြီး ဂုဏ်ပြုရ မလိုပါပဲ ။
” Shameless Nikki revealed that when she ran out of men in her own town,
she headed abroad for three sex sessionsaday ”
သူနေတဲ့မြို့မှာ ယောက်ျား ကုန်သွားလို့ရှိရင် ၊
တခြားမြို့ကိုသွားပြီး တနေ့ကို သုံး sessions သွားဆွဲပါသတဲ့ ။
သုံး sessions ဆိုတာက သီးခြား ယောက်ျား သုံးယောက် နှင့်
တနေ့ထဲ ၃ ချိန်ခွဲတွေ့တာကို ပြောတာပါ ။
၃ ချီ ထက်များဘို့များပါတယ် ။ ၆ ချီ လောက်ဖြစ်ဖို့များတယ် ။
သာဓု ပါတော် ။ သာဓု ပါ ။
မှတ်ပလား သူကြီး ။
ဘာ ” သူ့နှုန်းက ၂ရက် ၃ယောက်နှုန်းဖြစ်နေတယ်။
ဟုတ်ပါ့မလား ” လေးဘာလေးနှင့် ၊
ဟိုကဖြင့် ၁ ရက် ၃ ယောက် ၊ ၁ နေ့ ၆ ချီ လောက် ဆွဲနေတာ ။
By the time I was 18, I had moved out of home and in with friends and
there were nearly 800 in my book.”
သူက ၁၈ နှစ်ပြည့်ကတည်းက အိမ်ကခွဲထွက်နေပြီတဲ့ ။
သူနှင့် အိပ်ခဲ့တဲ့ ဘဲတွေရဲ့ ( sex ) အရည်အချင်းကို
ကြယ်ပွင့်လေးတွေနှင့် အဆင့် သတ်မှတ်ပေးပြီး
သေချာ မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်တဲ့ ။
( ဟော်တယ်တွေမှာတော့5Stars အကောင်ဆုံး ဆိုပဲ )
အဲဒီ စာရင်းကိုသာ ထုတ်ပြန်လိုက်လို့ကတော့ သောက်ဂွ ပဲ ။
” she boasted about her “personal best” of
four men in one night duringaboozy holiday to Ibiza ”
သူမ အကြိုက်ဆုံးကတော့ Ibiza ဆိုတဲ့နေရာမှာ တုန်းက ၊
တစ်ညတည်း ယောက်ျား ၄ ယောက်နှင့် အိပ်ရတာပဲတဲ့ ။
မှတ်ပလား သူကြီး ။ ဟင် ။
” Talking about the first time she had sex,
Nikki said: “I’d discovered something I was good at ”
သူမရဲ့ ပထမဦးဆုံး အပျိုစင်ည အပြီးမှာတော့ ၊
သူမ ဟာ ဘယ်အတတ်မှာ ပါရမီ ရှိတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရပါတယ်တဲ့ ။
အင်းးးး ၊ အချက်အလက် Fact တွေကြည့်ရတာတော့ မှန်လောက်ပါတယ် ။
” I was proud of how many men I was sleeping with and
I was scared I would lose track ”
သူမက ယောက်ျား ဦးရေ မြောက်များစွာနှင် အိပ်ဖူး / အိပ်ဆဲ တာကို ဂုဏ်ယူမိပါတယ်တဲ ။
အဲဒီ လမ်းကြောင်းမှန်လေး အတိုင်း ဆက်မရှောက်နိုင်မှာကိုတောင် စိတ်ပူမိပါတယ်တဲ့ ။
ဦးတည်ချက်ပျောက်လို့ ဘယ်ဖြစ်မှာလည်း ။ ဆက်လျှောက် သမီးရေ ။ ဆက်လျှောက် ။
ဒီကောင်မလေး သတင်း ကလည်း ရက်စက်ချက် က ၊
သတင်း ကို ရိုးရိုး သာမာန် ဘာသာပြန်တာကိုပဲ
ရတနာဝင်းထိန် စာအုပ် ဘာသာပြန် သလိုဖြစ်နေပြီ ။
ဒုက္ခ ။ ဒုက္ခ ။
အသက်လေးကလည်း ငယ် ၊
ရုပ်လေးကလည်း ချော ၊
ပစ္စည်းလေးကလည်း သင်ချာဝင့်ကျော် ထက်တောင် ရှိ နေတော့ ၊
ကြံတိုင်းအောင် ဆောင်တိုင်း မြောက်နေတာပေါ့လေ ။
Guinness Book of World Records မှာ ပါဝင်နိုင်တဲ့အထိ
အောင်မြင်ပါစေလို့ ၊ အဘ ဆုတောင်းပေးပါတယ် ကွယ် ။
” Nikki has kept details of EVERY ONE of her sex sessions in her own little red notebook – and scored each man out of ten ”
” I putastar beside the lads who were best in bed ”
Sorry , Correction !!!
သူမက ယောက်ျား တွေရဲ့အဆင့်ကို
အဆင့် တစ် ကနေ အဆင့် တစ်ဆယ် အထိ အမှတ်ပေး / အဆင့် Grade ခွဲထားပြီး ။
အတော်ဆုံး / Performance အကောင်းဆုံး ဘဲဘဲ တွေကိုတော့ ၊
နာမည်ဘေးမှာ ကြယ်ပွင့်လေးတွေပါ ချီးမြှင့်ထားပါတယ်တဲ့ ။
အော် ၊ ငါတို့ သူကြီး တော်လှ တော်လှ နှင့် ၊
ဘေးမှာ ကြယ် ၄ ပွင့် ရနေတာ ဒါ့ကြောင့်ကိုး ။
အဘ ချန်ခဲ့တာလေး မောင်ဂီ့ ဆက်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဗျာ..
ဘယ့်နှယ့် သင်္ချာလေး ကို ဆွဲထည့်ရတာတုန်းဗျာ…
ခုတောင် စိတ်ထိခိယက်ပါတယ် ဆိုမှ…
၁၈နှစ်သမီး အရွယ် အိမ်က ထွက်ခဲ့တုန်းကတောင် သူ့ စာအုပ်မှတ်တမ်း မှာ လူ၈၀၀နီးပါးရှိပါပြီတဲ့…။
အို ကွယ် …. ကြံကြံဖန်ဖန်..
သူမဟာ ဂရုတစိုက် ရှိပြီး အစွပ်လည်း သုံးသလို ပဋိသန္ဓေတားဆေးကိုလည်း သုံးစွဲပါသတဲ့ …
မသုံးရင် တောင်းနဲ့ လိုက်ကောက်ရမှာပေါ့ ခေးရယ်…
Love It! ဆိုတဲ့ မဂ္ဂဇင်း ကို သူမ ပြောကြားခဲ့တာကတော့ ကျမရဲ့ အလေ့အထ ဟာ ဘယ်သူတဦးတယောက်ကိုမှ
ထိခိုက်နာကျင်စေမှာ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ ကျမရဲ့ လူနေမှု ပုံစံဟာ ကျန်းမာရေးအရ ထိခိုက်မှု မရှိဘူး ဆိုတာကို သေချာဖို့အတွက်
ဒေသဆိုင်ရာ လိင်ကျန်းမာရေး ဆေးခန်းတွေကို ရက်သတ္တပါတ် အနည်းငယ် ခြား ၁ကြိမ်စီ သွားရောက် စစ်ဆေးမှု ခံယူခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လိင်မှုရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူများကတော့ သူမဟာ သူမကိုယ်သူမ နည်းလမ်းပေါင်းများစွာနဲ့ ထိခိုက် စေကြောင်းဆိုပါတယ် ။
Dr Pam Spurr လို့ခေါ်တဲ့ လိင်မှုရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူ ဆရာဝန်ကတော့ ဒီလိုဆိုပါတယ်။
သူမဟာ ယောက်ျားပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့ အိပ်ခဲ့တယ် ဆိုတာကို သိရတော့ ကျနော် အလွန်အမင်း အံ့အားသင့်ခဲ့ရပါတယ်။
နည်းစနစ် ပိုင်း အရ ဒါဟာ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ် ဆိုပေမယ့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ တော့ အလွန့်အလွန် အန္တရာယ်ကြီးပါကြောင်း။
ကြာတော့ ကြာပါပြီ အခြား သတင်း တပုဒ်မှာ အနှီအမျိုးသမီးပဲထင့် …
ယောက်ျားတွေ အတော်များများဟာ ဘ၀ တသက်တာမှာ ကုတင် တလုံး ရဲ့ ခြေထောက်အရေအတွက်
မပြည့်တဲ့ မိန်းမတွေနဲ့သာ အိပ်ဖူးကြကြောင်း ရိထားတာ ဖတ်ဖူးရဲ့ဗျာ….။
ဒါ သက်သက် စော်ဂါးတာ …
သဂျီးမင်းနဲ့ တကွ …အဂ္ဂမဟာ ပုရိသ အပေါင်းတို့ရေ ………
ဘာမှ မီဟုတ်ပါဝူးဂျာ ..ဗိုက်ခေါက်လေးတွေ သတိထားကြပါ ပြောမလို့ပါ..
ဤသို့ ပြုရ ကုသလ ကြောင့်..
တင်ပါ့ …အေကေဘီ ဖိုတီအိတ် လို့ ခေါ်ပါတယ်ဖျား ….
afraid ” AIDS ” instead of her
Nikki Lee တဲ့ သကောင့်မလေး နောက်ဆုံးနာမည်ကိုက မြန်မာပြည်မှာဆိုရင် အတော်ပြောစမှတ်တွင်မှာပဲ…။ အဘဖောတို့ သူကြိးတို့။ ဂီတို့ ထပ်မံဖြည့်စွက်ပေးမှပဲ အတော်ကလေးကိုရှင်းသွားတော့တယ်။ ဒီသတင်းက ၂၀၁၀ ကဆိုတော့ အခုဆိုရင် ဘယ်လောက်ဖြစ်နေပြီလည်းမသိတော့ဘူး။
ဒီကောင်မလေး အာဂ တို့ ပေါက်ဖော် တို့နဲ့ မတွေ့သေးလို့
စာရင်းမှာ ၅၀၀၀ ကျော်နေတာ
ဒီဆရာတွေ့နဲ့ တွေ့ပြီးရင် စာရင်းပိတ်လိုက်ရမှာ
အဟီး သားတို့က ဆရာပြောသလောက် ကမ္ဘာကျော်အောင်မကြီးသေးဘာဘူး..နော့…။ နာမည်ပြောပါတယ်။